» ‘भारतीय दलाल’हरुको म्युजिकल चेयर
२४ असार २०७७, बुधबार १२:४०
तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘भारतीय दलाल’ भनेको भिडियो अझै सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेको हुन्छ । त्यसमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यी केपी ओली भन्ने मान्छे मान्नुस कि वामपन्थी आन्दोलनभित्रका सूर्यबहादुर थापा जस्तै हुन् । यी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका भारतीय दलाल हुन् ।’
यिनै प्रचण्डलाई यसपटक तिनै केपी ओलीले ‘भारतीय दलाल’ करार गर्दिए । नक्सा प्रकरणपछि ‘भारतीय दलाल’ आफ्नो सरकार हटाउन सक्रिय भएको भन्दै ओलीले अन्तर्पार्टी संघर्षमा ‘भारतीय दलाल’ को रक्षाकवच प्रयोग गरे । ओलीले यसपाली प्रचण्डलाई मात्र हैन, माधब नेपाललाई पनि ‘भारतीय दलाल’ को कित्तामा धकिलिदिए ।
रमाइलो कुरा के छ भने एकिकृत महाकाली सन्धी र एमाले पार्टीको छैठौं महाधिवेशनको सेरोफेरोमा ‘माधब–केपी’ एउटै प्याकेजभित्र ‘भारतीय दलाल’ थिए । वामदेव गौतम् समूहले उनीहरुलाई लामो समयसम्म ‘भारतीय दलाल’ करार गरिरह्यो । २०५६ को आम निर्वाचनमा शुन्य सीट हासिल गरेपछि वामदेव गौतम नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माले) फेरि एमालेमै विलय भयो । त्यसपछि गौतमले माधव–केपीमाथिको ‘भारतीय दलाल’ को बिल्ला स्थगन गरे ।
माओवादी आन्दोलनभित्र प्रचण्ड डा. बाबुराम भट्टराईलाई बदनाम गर्न ‘भारतीय दलाल’ को थेगो प्रयोग गर्थे । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पछि राजासँग मिलेर सत्तासाझेदारी गर्ने कि तत्कालीन ७ दलीय संसदवादी दलसँग मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशामा जाने भन्ने विवाद चर्किएका वेला प्रचण्डले भट्टराईलाई जनमुक्ति सेनाको गिरफ्तारीमा राखेका थिए, त्यसको आरोप त्यही ‘भारतीय दलाल’ थियो ।
नेपाली राजतीतिमा ‘भारतीय दलाल’ विरोधी पक्ष वा पार्टीलाई डाम्ने सजिलो उपाय हो । जसलाई ‘भारतीय दलाल’ भन्दियो, जनताले सजिलै पत्याउँछन् र उसमाथि हावी हुुन सकिन्छ भन्ने सोच नेपाली राजनीतिकर्मीहरुको मानसिकताबाट कहिल्यै गएन ।
यो म्युजिकल चेयरको खेलमा कहिले कस्कोे पालो, कहिले कस्को । यो कार्ड सधै प्रचण्डले खेल्न सम्भव थिएन, यसपटक ओलीले खेल्दिए । महाकाली सन्धि पश्चात् निरन्तर ‘भारतीय दलाल’ को आरोप खेपेका ओलीले ‘भारतीय दलाल’ले डाम्दा हुने पीडाको राम्रो अनुभूति गरेका थिए । यसपटक आफ्नै सहकर्मी दाहाल–नेपालतिर फर्काइदिए ।
लेखक: विश्वदीप पाण्डे
नेपालमा ‘भारतीय दलाल’ बन्ने, बनाउने खेलको लामो इतिहास छ । २००७ सालमा राणा, शाह र कांग्रेसको त्रिपक्षीय दिल्ली–सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेस र बिपी कोइरालालाई बदनाम गर्न कम्युनिष्टहरुले यो प्रचलन प्रारम्भ गरेका थिए । दिल्ली सम्झौता कस्तो अवस्थामा कसरी भयो भन्ने खुलासा बीपीले आफ्नो ‘आत्म–वृतान्त’ गरेका छन् ।
२०१७ सालमा पञ्चायतको उदयपछि राजा महेन्द्र र उनका सहकर्मीहरुले कांग्रेस–कम्युनिष्ट दुवैलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ (अत) बनाइदिए । महेन्द्रवादी विश्लेषणमा नेपाली कांग्रेस ‘भारतीय दलाल’ थियो भने कम्युनिष्टहरु ‘चिनियाँ एजेन्ट’ थिए । यी दुवै शक्ति राष्ट्रवादी हैनन भन्ने अर्थमा ‘अराष्ट्रिय तत्व’ प्रयोग गरिन्थ्यो ।
राजावादीहरुले ‘अराष्ट्रिय तत्व’ को थेगो कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई गाली गर्न तीन दशकसम्म निरन्तर प्रयोग गरे । २०४६ मा पञ्चायतको अन्त्यसंगै ‘अराष्ट्रिय तत्व’ नेपाली राजनीतिको शब्दकोषबाट गायब भयो ।
तर, ‘भारतीय दलाल’ भने झनझन मौलाएर आयो । तत्कालीन एमालेले २००७ को पुरानो कम्युनिष्ट भाष्य पुनर्स्थापित गर्‍यो । नेपाली कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि निरन्तर ‘भारतीय दलाल’ आरोप लाग्यो । नभन्दै ‘टनकपुर सम्झौता हैन, सहमति हो’ भन्दै कोइरालाले ‘भारतीय दलाल’ हुन् योग्य स्पेश निर्माण गरे । कोइरालालाई ‘भारतीय दलाल’ सिद्ध गर्ने खेलमा मदन भण्डारीसँगै माधव–केपी समूहको ठूलो भूमिका थियो ।
भाग्य भनौं मदन भण्डारीले त्यो आरोप सामना गर्नु परेन । लामो बाँच्थे भने सायदै उनी पनि यो आरोपबाट मुक्त हुन गाह्रो थियो । म्युजिकल चेयरको खेल अर्को राउण्ड गयो । अब ‘भारतीय दलाल’ हुने पालो ‘माधव–केपी’ को आयो ।
विवादस्पद एकिकृत महाकाली सन्धिले यो स्पेश बनाइदियो । कोइरालामाथिको बिल्ला पुरानिएर खुइलो देखियो । ‘माधप–केपी’ को ‘भारतीय दलाल’ को बिल्ला त्यो बेला भरभराउँदो थियो ।
यो खेललाई माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले नयाँ उच्चाईमा विकास गरे । उनले कोइराला–माधव–केपीलाई एउटै डालोमा मात्र हालेनन्, बरु डा. बाबुराम भट्टराईसमेत लगेर त्यही प्याकेजमा हुली दिए । कोइरालाको टनकपुर सहमति, माधव–केपीको एकीकृत महाकाली सन्धिजस्तो डा.भट्टराईलाई डाम्न कुनै घटना वा प्रकरण थिएन, तर अन्तर्पार्टी प्रतिस्पर्धामा भट्टराईलाई बिटुलो देखाउन प्रचण्डका लागि यो सजिलो उपाय थियो ।
फेरि मधेश आन्दोलन आयो, अधिकांश पुराना ‘भारतीय दलाल’ एक ठाउँ भए, अब मधेश आन्दोलन र यसका नेतालाई ‘भारतीय दलाल’ देख्न थाले । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । त्यसको पछिल्लो शिकार प्रचण्ड आफै भएका छन् ।
यथार्थमा यो कुनै राम्रो प्रचलन हैन । कुनै पार्टी र देशभित्रका आन्तरिक सवाल वा दृष्टिकोणको भिन्नतालाई छिमेकी देशसँग लगेर जबरजस्त जोड्नु र आरोप, प्रत्यारोप गर्नु सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिको लक्षण त हैन, हैन, कुटनीतिज्ञ मर्यादाको दृष्टिकोणले पनि शोभनीय हैन ।
‘भारतीय दलाल’ को ट्याग नेपाली राजनीतमा बारम्बार प्रयोग हुनुमा नेताहरुको संकिर्ण सोच त जिम्मेवार छ नै, ‘भारतीय दलाल’ भन्दिए, सजिलै पत्याउने वा त्यसकै आधारमा ध्रुवीकृत भएर दृष्टिकोण निर्माण गर्न थाल्ने नेपाली मनोविज्ञान पनि जिम्मेवार छ । नेपालमा जे हुन्छ, वा भइरहेको छ, त्यो सबै भारतको कारणले हुन्छ भन्ने धारणा हिनताग्रस्त धारणा हो । नेपालको मिडिया र बौद्धिक जगतले पनि यो ‘राष्ट्रिय हिनताभाष’ लाई जानेर, नजानेर प्रवर्द्धन गरेका छन् ।
कसैले कसैलाई ‘भारतीय दलाल’ भन्दैमा पत्याउने वा त्यसैका आधारमा दृष्टिकोण बनाउन थाल्ने हो भने नेपालमा कोही ‘नेपाली’ बाँकी रहने छैन, सबै एक से एक ‘भारतीय दलाल’ ले देश भरिनेछ । लोकतन्त्रमा दृष्टिकोण र धारणाको भिन्नता स्वभाविक प्रक्रिया हो । राजनीतिक दृष्टिकोण र धारणा नमिल्दा कसैले कसैलाई ‘भारतीय दलाल’ भन्ने प्रचलन किमार्थ राम्रो हैन ।
भारतसँगका मुद्दामा सबै नेपाली एक ठाउँमा हुन सक्दछन् भन्ने कुरा ‘चुच्चे नक्शा प्रकरण’ ले पुष्टि भइसकेको छ । यो ‘भारतीय दलाल’ बन्ने, बनाउने यो म्युजिकल चियरको खेल सबैले परित्याग गर्न जरुरी छ ।
साझापाेष्टबाट साभार गरिएकाे विचार ।